Nguva Yekutsvagisa, Odhita, uye Disavow Backlinks Kuti Uvandudze Kutsvaga Nzvimbo | Martech Zone
Ndanga ndichishandira vatengi vaviri mumatunhu maviri anoita basa rakafanana repamba. Mutengi A ibhizinesi rakasimbiswa rine makore angangoita makumi mana echiitiko munharaunda yavo. Mutengi B mutsva ane makore angangoita makumi maviri echiitiko. Isu takapedza kuita saiti nyowani mushure mekuita kuwanikwa kune yega yega vatengi vakawana mamwe anonetsa ekutsvaga organic mazano kubva kumasangano avo:
Reviews -Masangano akaburitsa mazana emapeji ega ega ane wongororo imwe pane yega yega yaive nezvidiki zviri kunze kwesevhisi uye mitsara mishoma muongororo. Zvaive pachena kuti chinangwa chavo apa chaive chekuyedza kushandisa mazwi makuru eiyo geography nebasa rakapihwa.
Mapeji Enharaunda -Masangano akaburitsa akawanda emapeji emukati ane akadzokorora zvirimo zvebasa repamba rakapihwa asi akatsanangura rimwe guta kana dunhu rakasiyana mumusoro uye muviri. Chinangwa apa chaive chimwe chete… kuyedza kuisa mari pamazwi akakosha eiyo geography uye sevhisi yakapihwa.
Handisi kuti iri izano iroro ndakatadza kushandiswa, kwaingove kuri pachena uye kupusa kuita zvemukati izvo zvakanangwa dunhu nebasa. Ini handisi fan weiyi zano zvachose, takawana budiriro inoshamisa pakungotsanangura nzvimbo dzesevhisi muzasi, kusanganisira kero yenzvimbo yebhizinesi (s) muzasi, kusanganisira nhamba dzerunhare (nenzvimbo yemuno. kodhi), uyezve kuburitsa ruzivo rwakasimba mumuviri wepeji nezve sevhisi.
Hapana zvachose chikonzero nei peji redenga, semuenzaniso, risingakwanisi kuverengerwa zvakanaka kune "Roofing Contractor" mumatunhu ese anoshandira kontrakta. Ndoda kushanda pakunatsiridza nekugadzirisa peji rimwe chete redenga pane kuita gadzira uye tevera akawanda mapeji emutengi.
Chakanyanya kuipisisa, vese vatengi ava vanga vasiri kuwana chero inotungamira kuburikidza nesaiti yavo uye masanjiro avo akange asati apinda mukati megore. Zvakare, masangano avo akateedzana ane saiti (s) uye imwe agency kunyange ane domain registration. Saka… mari yese yavaidyara yakanga isiri kuvaswededza pedyo nekunyatso kusimudzira bhizinesi ravo. Vakasarudza kupa kambani yangu pfuti pakushandisa zano idzva.
Kune vese vatengi, takashanda kugadzirisa kutsvaga kwavo kwenzvimbo kuoneka nekuvaka saiti ichangobva kugadziridzwa, kutora drone uye pamberi / mushure mafoto ebasa ravo chairo pachinzvimbo chekutora mifananidzo, yakatanga ongororo yekutora mishandirapamwe, ikavasiyanisa kubva kune vavakwikwidziri vavo, yakanangazve zviuru zvemukati zvinongedzo kumapeji akakodzera, uye zvave zvichiitwa. kushanda mukuwedzera kusvika kwavo paYouTube, zvemagariro, madhairekitori, uye madhairekitori evagadziri.
Nguva Yekuita A Backlink Audit
Chinhu chinotevera chakaitika ndechekuti:
Mutengi A – avo vatakanga tashanda kwenguva refu, vakanga vasinganatsiridzi kuonekwa kwavo kweinjini yekutsvaga kunze kwemazwi akakosha. Isu takaenderera mberi nekukwirisa mapeji, akabatanidzwa kumashure kubva kuYouTube, akagadziridzwa anopfuura makumi manomwe madhairekitori… uye tichiri kungoita chero kufamba. Key aiona -asina mazita ezvinyorwa kusambokwira kumusoro… zvese zvakavigwa papeji 5 kana kudzika.
Mutengi B - mukati mevhiki yekuburitsa saiti yavo vakashuma kuti vari kuwana magwara akanaka, uye nzvimbo dzavo dzakakwira isina-branded mazwi akakosha.
Mushure mekutsvagisa makwikwi avo uye nekugadzirisa mapeji avo kwemavhiki, taifanira kuchera zvakadzama kuti nei Mutengi A yakanga isingafambi. Nekuda kwemaitiro asina mubvunzo akaiswa kare, isu taida kutarisa kunaka kweiyo backlinks panzvimbo yavo. Yaiva nguva yekuita a backlink odhita!
A backlink audit inoratidzira zvese zvinongedzo kune yavo saiti kana mapeji emukati uye kuongorora kunaka kwemasaiti uko backlink iripo. Backlink ongororo inoda wechitatu-bato SEO tool... uye ndinoshandisa Semrush. Kuburikidza nekuongorora uku, unogona kuona zvinongedzo zvinobva kunzvimbo dzemhando yepamusoro pamwe neakaipa backlinks (inozivikanwawo sehupfu) yaunofanira kubvisa kana kuzivisa Google nezvayo.
Ndezvipi Zvakaipa Backlinks?
Heino vhidhiyo yekutarisa yakakura yebacklinks uye chii chakaipa chinongedzo, mashandisirwo avanoitwa nevashandisi veblackhat SEO, uye nei ivo vachityora zvirevo zveGoogle uye zvinofanirwa kudziviswa chero muripo.
Backlink Audits uye Diavowing Backlinks
kushandisa Semrush's backlink audit, takakwanisa kuona zvakajeka madomasi uye mapeji airatidza saiti yavo:
Ndapota ramba uchifunga kuti zvishandiso zvakafanana Semrush zvinoshamisa asi hazvigone kuongorora mamiriro ese kune wese mutengi. Pane musiyano muhombe, pazviverengero, pakati pebhizinesi diki remuno nesevhisi yepasi rese kana yemitauro yakawanda online. Aya maturusi anowanzo kubata ese ari maviri zvakaenzana izvo zvandinotenda kuti kudzikisira kwakanyanya. Muchiitiko chemutengi uyu:
Low Total - Nepo chirevo ichi chichiti, akakwana, handibvumirani nazvo. Iyi dura ine yakaderera nhamba yezvese backlinks saka kuva neimwe chaiyo chepfu backlink - mumaonero angu - raive dambudziko.
Quality -Kunyangwe chinongedzo chimwe chete chairondedzerwa se toxic, ndakawana mamwe malink akati wandei aive fungira mukati meodhita asi akaiswa pazasi pechikumbaridzo chine muchetura se ngozi. Vaive pamapeji aive asingaverengeki, pamadomasi asina musoro, uye izvo hazvina kuunza kunongedzera traffic kune saiti.
Chii chinonzi Disavow?
Google inopa nzira yekuvazivisa kana izvi zvakaipa zvinongedzo zviri kunze uko, maitiro anozivikanwa sea disavow. Unogona kurodha mameseji faira akareruka anonyora madomasi kana maURL aunoda kubvisa kubva kuGoogle index kana uchifunga kuti saiti yako inofanira kumira sei.
Disavow -Ndakaverenga akati wandei pamhepo apo SEO nyanzvi dzinoshandisa disavow maturusi kutaura zvakasununguka matani emadomasi nemapeji kuGoogle. Ndiri kunyanya kuchengetedza mumaitiro angu… ndichiongorora chinongedzo chega chega chemhando yesaiti, traffic yarinoreva, chinzvimbo chayo, nezvimwe. Ndine chokwadi chekuti mabacklinks akanaka asara ega uye zvinongonetsa uye zvine chepfu zvinongedzo zvinobviswa. Ini ndinowanzo sarudza kudivi rekudzima domain yese pane peji futi.
Panzvimbo pekushandisa Google's disavow chishandiso, unogona zvakare kuedza kubata arikureva saiti muridzi kuti abvise chinongedzo ...
Semrush Disavow Zvishandiso
Zvishandiso zviripo kuburikidza neSemrush zvakanyatso fungwa-kunze kuchengetedza saiti yako kana vatengi vako. backlink profiles. Zvimwe zvezvishandiso zvinopihwa nechishandiso:
tsananguro - chirevo chaunoona pamusoro.
Audit - rondedzero yakazara yezvese backlink inowanikwa kune yako saiti, ine muchetura, iyo peji rekuenda, iyo anchor zvinyorwa, pamwe nezviito zvaunogona kutora, sekunge wachena kana kuwedzera iyo domain kana peji kune disavow text file.
Disavow - kugona kurodha yako yazvino disavow faira resaiti kana kudhawunirodha itsva disavow faira rekuisa muGoogle Search Console.
Tracking - nekubatanidzwa kuGoogle Search Console uye Google Analytics, yako disavow ikozvino inogona kuteverwa mukati mako Semrush purojekiti yekuona kushanda kwayo.
Heino mufananidzo weiyo backlink odhita …Ndaifanira kubvisa ruzivo rwemutengi kubva panzvimbo, chinangwa, uye zvinyorwa zveanchor sezvo ndisingade makwikwi kuona wandiri kushanda.
Iyo disavow mameseji faira iyo Semrush inovaka uye inokuchengetera iwe yakakwana, yakatumidzwa nezuva uye inosanganisirwa makomendi mufaira:
Nhanho inotevera ndeyekuisa iyo faira. Kana iwe usingakwanise kuwana Google's Diavow Turu mukutsvaga koni, heino chinongedzo kwaunogona kurodha yako Disavow text file:
Google Search Console Diavow Links
Mushure mekumirira 2-3 mavhiki, isu tava kuona mafambiro pane asina-branded keywords. Iyo disavow iri kushanda uye mutengi ave kukwanisa kukura yavo isina-branded yekutsvaga kuoneka.
Usambobhadhara Kune Backlinks
Kufungidzira kwangu ndekwekuti femu yekupedzisira yanga ichitarisira saiti yemutengi yanga ichiita imwe yakabhadharwa backlinking kuyedza kuvandudza nzvimbo yavo yese. Iri ibhizinesi rine njodzi… inzira huru yekudzingwa nemutengi wako uye kuparadza kuoneka kweinjini yekutsvaga. Gara uchikumbira kuti agency yako iburitse kana vari kuita iro rudzi rwebasa kare.
Ini chaizvo ndakaita ongororo yebacklink yekambani yaienda kuruzhinji uye yakanga yaisa mari yakawanda muSEO firm makore apfuura. Ndakakwanisa kuronda zviri nyore malink kudzokera batanidza mapurazi vakanga vachivaka kuti vakure kuoneka kwevatengi vavo. Mutengi wangu akabva angodonhedza kondirakiti ndokubva aita kuti ndishande pakubvisa ma link. Dai vakwikwidzi, vezvenhau, kana Google yaona zvinongedzo, bhizinesi remutengi uyu ringadai rakaparadzwa… chaizvo.
Sezvandakaitsanangurira kune mutengi wangu… dai ndaigona kuronda zvinongedzo kumashure kune yavo SEO femu nematurusi akadai Semrush. Ndine chokwadi chekuti zviuru zvePhDs kuvaka maalgorithms kuGoogle anogona zvakare. Vanogona kunge vakawedzera chinzvimbo munguva pfupi, asi pakupedzisira vaizobatwa vachityora Mitemo yeSevhisi yeGoogle uye - pakupedzisira - kukuvadza mhando yavo zvisingagadzirisiki. Tisingatauri nezve imwe mari yekuwedzera yekuti ndiite ongororo, iyo backlink forensics, ipapo madhiri kuti arambe akayangarara.
Nzira yakanaka yekuwana backlinks ndeye vawane. Gadzira zviri mukati mezvese midhiya, govana uye simudzira zvirimo mukati mese chiteshi, uye iwe uchawana anoshamisa backlinks. Iro basa rakaoma asi hapana njodzi inosanganisirwa pakudyara kwauri kuita.
Kana urikuomerwa nenguva uye uchida rubatsiro, tinobatsira vatengi vakati wandei nekuedza kwavo kweinjini yekutsvaga. Bvunza nezvedu SEO kubvunza kunzvimbo yedu.
kuburitsa: Ini ndiri mushandisi wesimba uye anodada akabatana nayo Semrush uye ndiri kushandisa yangu affiliate links muchinyorwa ichi.
Tags: backlink odhitabacklink forensicsbacklink profilebacklinkingBacklinksbacklinks dzakaipazvisungo zvakaipadisavowgoogle yekutsvaga konimaitiro ekuita backlink auditnzira yekutsvaga backlinksbatanidza detoxlink forensicslinkrekuchinaakabhadhara backlinksSearch Engine OptimizationsemrushSemrush backlink zvishandisoseochepfu backlinks
Mar 5, 2013 pa 1: 46 PM
Zvakaita sewaiziva kuti ndiri kuita izvi manheru ano. Wakaita kuchenesa kwese backlinks asi kune peji reimba resaiti nekushandura maURL uye kwete 301ing iwo - hombe PITA. Zvinotora mwedzi asi ndosaka ndichiwana rima grey hat.
Ichafanirwa kudzima peji reimba
Sep 6, 2013 pa 11: 31 AM
Inzira iri nyore shamwari. Ingo pinda kuLinkResearchTools uye zvimwe zvese ivo vanozviita otomatiki. Ndakaverenga chinyorwa chine chekuita Maitiro ekudzivirira Penguin nemaitiro emaoko. http://www.technologyace.com/internet-marketing/seo/recover-blogwebsite-google-latest-penguin-2-0-update/
Nov 27, 2013 na6:42 AM
Pandakashandisa Link Research uye Link Detox ndakaodzwa mwoyo zvikuru nebasa uye mhedzisiro. Hapana zvakawanda zvakaitika, uye handina kupiwa rubatsiro rwakawanda pandaida. Ndakasarudza kushandisa The Link Auditors kuti ndigadzirise backlinks dzangu mushure mekuona maitiro akanaka kwazvo pamaforamu akasiyana-siyana. Basa ravo rakanga riri nani zvikuru! Ivo vane timu inogara iripo kuti ikubatsire nemibvunzo kana zano. Ndichishandisa maturusi eThe Link Auditors, ndakakwanisa kuwana zvese zvangu zvine muchetura zvinongedzo, uye ndakazvibvisa zvese zvizere. Jason, nhengo yechikwata yandakataura naye, aibatsira zvikuru parutsigiro rwerunhare. Aiteerera matambudziko angu uye akatsanangura chaizvo zvakanga zvisina kunaka. Paakangoita izvi akandiudza kuti ndeapi maturusi aizondinakira.
Ndichishandisa maturusi eThe Link Auditors, ndakawana data rakadzama, ndainyatsoona kuti ndeapi malink aindikuvadza uye ndaiziva kuti ndeapi malink aidiwa kubviswa. Kushandisa yavo yekubvisa turusi kwaive nyore kwazvo sezvo iri yakazara otomatiki uye nekukurumidza. Ndakashandisa akasiyana siyana ekubvisa maturusi anga aripo painternet, uye yavo yaive yakanyanya kunaka!
Nov 28, 2013 na4:31 AM
Ndakashandisa The Link Auditors futi. Vakandibatsira zvakanyanya nekuongorora kwangu, vachindipa tsigiro pandaida pamwe nekunditsanangurira dambudziko rangu. Ndinokutendai nekutumira izvi sezvo ndinofunga kuti vanhu vakawanda vanofanira kuziva nezvavo. Iyo sevhisi yavanopa inongonakidza, saka yakavimbika uye iri nyore kuita.